Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Tsindrio raha hihaino rakipeo Podcast eTN bebe kokoa • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • LGBTQ • Other • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao mivalona • News News
Fitsangatsanganana LGBTQ mandritra ny COVID-19: Orinasa trillion dolara
Home » Lahatsoratra » Other » Fitsangatsanganana LGBTQ mandritra ny COVID-19: Orinasa trillion dolara
Ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany LGBTQ dia manana fahefana mividy maherin'ny 1 tapitrisa tapitrisa ao Etazonia fotsiny.
Tamin'ny 1992, namana roa, Thomas Roth sy David Paisley, manam-pahaizana momba ny siansa ara-barotra sy ara-tsosialy ary mpikambana ao amin'ny fiarahamonina LGBTQ - no nanana hevitra. Tian'izy ireo ny manampy ny orinasa sy ny marika hahatakatra ny fiarahamonina LGBTQ vao misondrotra ary hampiditra azy io ho toy ny fizarana tsena azo iainana.
Tamin'ny voalohany, tsy mora izany. Tany am-piandohan'ny taona 90 dia marika iray lehibe ihany no mivarotra mavitrika amin'ny LGBTQ: Absolut Vodka (izay lasa mpanjifa CMI taty aoriana).
Mba hanokafana varavarana, dia natombok'i Tom sy i Dave ny fandalinana ho an'ny mpanjifa LGBTQ voalohany, ary ny zavatra hita dia notononina tamin'ny gazety lehibe.
Nandehandeha nanerana an'i Amerika Avaratra sy tany ivelany izy ireo, niresaka tamin'ny mpitantana sy tamin'ny kaonferansa marobe, ary tsy nitsahatra nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny hanatratra sy hanompo ny vondrom-piarahamonina LGBTQ.
Ankehitriny, 25 taona mahery taty aoriana, izy ireo dia lohandohan'ny orinasa mpikaroka LGBTQ malaza sy hajaina indrindra eran'izao tontolo izao. Nandritra ny taona maro, Tom, Dave sy ny ekipan'izy ireo dia nanampy orinasa sy marika an-jatony hifandray, hirotsaka ary hivarotra ny fiparitahan'ny sokajy LGBTQ.
Ny zavatra natomboka tamin'ny hevitra 30+ taona lasa izay dia nanova ny fomba fahatakaran'ny orinasa, marika, fiarahamonina ary governemanta amin'ny fiaraha-monina LGBTQ.
Saingy mihoatra ny fanaterana isa sy tabilao, Fivarotana sy fijerena ny fiarahamonina manararaotra traikefa, fifandraisana ary fahitana lalina izay tsy manam-paharoa.
Henoy i Thomas sy David mizara ny toe-javatra ho an'ny Indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany LGBTQ mandritra ny COVID-19